Iimpawu, indlela yobomi kunye nebhayoloji ye-basking shark | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngohlobo oluthile olungaqhelekanga lukakrebe. Malunga nayo ukubhaka ukrebe. Igama layo lenzululwazi ngu ICetorhinus maximus kwaye ithathwa njengeyona ntlanzi yesibini ngobukhulu emhlabeni. Iyakwazi ukufikelela kwiimitha ezili-10 ubude kunye neetoni ezi-4 ngokobunzima. Ine-silhouette enomtsalane eyenza ukuba ibe ngookrebe bokuzingela kunye nomphunga obukhali. Liyaziwa ngabantu abathanda ulwandle.
Kule nqaku siza kukuxelela yonke into malunga ne-shark shark, ukusuka kweziphi iimpawu ezinayo ukuya kwindlela evelisa ngayo.
3 Ukutya ibasking kukrebe
5 Ukuziphatha kwe-sharking shark
Inesimo esifanelekileyo se-hydrodynamic nangona ihamba kancinci. Umphunga wayo obukhali uyayinceda itye ngokucoca amanzi. Bahlala bedada bevule umlomo ukuze bakwazi ukuwenza ujikeleze kwaye bacofe amanzi ngegill.
Ngokwesiqhelo, zibonwa ziselunxwemeni kwaye abakhenkethi bahlala bebuza ukuba bangazibona njani. Phezulu zihlala zibonwa kwaye ziyanyamezelana nobukho babantu. Nangona ukubonakala kwayo kungothusa, akunabungozi konke konke. Ukuba uhamba ngesikhephe esiselunxwemeni, ukrebe ngokuqinisekileyo uza kuza kuwe, kodwa angakukhathazi.
Le ndlela yokuziphatha eluntwini yenza ukuba ibe yinto yokuzingela ngokungakhethiyo ngabalobi. Ubungakanani kunye nobunzima obuye babusebenzela ukuba babe nenzuzo ephezulu kwiinqanawa zorhwebo. Ngukrebe kuphela okwaziyo ukuvelisa itoni yenyama kunye neelitha ezingama-400 zeoyile. Isibindi sisityebi kakhulu kwiivithamini kwaye sinokumela ukuya kuthi ga kwi-25% yobunzima bezilwanyana.
Ukutshutshiswa kwesi silwanyana kwixa elidlulileyo kubangele ukuba abantu baso bancitshiswe bafikelele kwinqanaba lokuba uninzi lwabantu lwangoku lukhuselwe ngumthetho kuninzi lwamazwe.
I-basking shark inokufumaneka kwiindawo zepelagic, ngenxa yoko siyibona rhoqo kwiindawo eziselunxwemeni. Indawo yokuhanjiswa kwayo ibanzi kakhulu, ke ngoko phantse kwihlabathi liphela. Ukusuka kwezona ndawo zikwimimandla esemazantsi olwandle ukuya kwiilwandle ezishushu. Banobuchule bokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo.
Banokubonwa kwimiphezulu yeeshelfu zelizwekazi. Nangona bekhetha amanzi abandayo, bahlala ukuhlala kwiindawo ezinamaqondo obushushu aphakathi kwe-8 kunye ne-14 degrees. Ihlala ibonakala kwiindawo ezikufutshane nakunxweme kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba ifikelele kwiindawo ezinamachweba kunye namazibuko.
Bafuna ukutya kwindawo enkulu yeplankton kumanzi anzulu. Kuqhelekile ukubabona bedada kufutshane nomphezulu womhlaba. Olu hlobo lukakrebe luneendlela ezithile ezifudukayo. Bayakwazi ukuhamba umgama omde elwandle kwaye bayakwenza oko ngokulandela utshintsho lwamaxesha onyaka ukuze bahlale bekho kubushushu obufanelekileyo.
Ebusika bachitha ixesha elide kufutshane nolwandle bekhangela ukutya, kuba akukho nto ingako ingaphezulu. Iyakwazi ukuhla ukuya ezilikhulu okanye amawaka eemitha ubunzulu.
Ukutya ibasking kukrebe
Nangona ngenxa yobukhulu bazo nokubonakala kwazo nokumila kwazo zibonakala ngathi zitya ezinye izilwanyana ezinje ngamatywina nezinye iintlanzi, oku akunjalo. Ngaphandle kwembonakalo eyoyikekayo, inokutya okuthandayo. Imalunga ne-zooplankton. I-Zooplankton zizilwanyana ezincinci ezifumaneka kufutshane nomphezulu wamanzi. Zizidalwa zasemanzini kunye nokudada okungalunganga, ngenxa yoko ziyabanjwa ngokulula.
Njengokuba umphezulu we-zooplankton usiya unqabile ebusika, u-shark okrebe kufuneka afudukele emazantsi ukuze afumane ukutya okanye ahambe amawaka eekhilomitha ayokufumana ukutya.
Ngokuqinisekileyo uyazibuza ukuba esi silwanyana senza njani ukuze sikwazi ukwahlula iplankton kumanzi awaginyeyo. Le nkqubo iyenza ngendlela enomdla kwaye inombulelo kwiimpawu ezithile zomzimba. Inee-rakers ze-gill ezinde kunye nee-rakes ezincinci ezisebenza ukucoca iplankton emanzini. Ezi rakes ziyimfuneko yokondla. Amanzi agqithisileyo awasebenzisayo agxothwa emzimbeni ngokusebenzisa izilayidi ezime nkqo.
Imilambo yezi zilwanyana isebenza nzima kangangokuba kufuneka itshintshwe rhoqo ngonyaka. Ngokwesiqhelo ziyalahlwa ngeenyanga zobusika kwaye ziphume kwakhona entwasahlobo xa kukho iiplankton ezininzi zokucoca kwiindawo ezikufuphi nomphezulu womhlaba.
Ezi zilwanyana Bafikelela kwinqanaba lokukhula ngokwesondo xa befikelela kwiminyaka eli-10 ubudala. Phambi kokuba bangazami ukuvelisa kwakhona kuba abakabi nakho ukukhula ngokwaneleyo kumalungu ukuze babe nabantwana. Uhlobo lokuvelisa kwakhona abanalo yi-ovoviviparous. Oku kuthetha ukuba, nangona amantshontsho aqandusela emaqandeni, ayakwenza oko esibelekweni sikanina. La maqanda aya kuqandusela ngaphakathi kwimazi kude kube kwakhiwe iimbumba kwaye zenziwe ngokupheleleyo.
Elona candelo likhethiweyo lokufuya ukrebe kuxa ihlobo liqala ngolawulo lonyaka omnye. Okwangoku, i-ecosystem ayithandeki kwaye ayithandi ukuba nezidalwa ezincinci. Ke ngoko bayakwazi ukwandisa ixesha lokukhulelwa ukuya kwiminyaka emi-3. Oku kukwazi ukusinda kubanika ithuba lokuba bakwazi ukukhetha ukuba leliphi elona xesha lifanelekileyo lokuba abancinci babe nempumelelo enkulu ekuzaleni.
Ukuziphatha kwe-sharking shark
Ngokumalunga nokuziphatha kwesi silwanyana, singathi siyathanda ukudada kwiindawo ezikufutshane nomphezulu wonxweme ngenxa yokuba kulapho kukho izondlo kakhulu kunye nenani elingaphezulu le-zooplankton elinokungena. Iqondo lobushushu apho angaphandle khona amanzi nangaphandle yinto egqibayo yokuba ingaba ingaphezulu okanye ngaphezulu okanye ifudukele ezinzulwini.
Sisilwanyana esinobudlelane esithanda ukwenza amaqela e ukuya kuthi ga kwimizekelo eyi-100 kwaye abenzi nto emntwini. Uyakwazi ukunxibelelana noogxa bakhe ngokubonakalayo ngokuhambisa nje amehlo emacaleni. Oku kuyabanceda ukuba bazi ukuba amarhamncwa, izikhephe, njl.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-sharking shark nayo yonke into eyingqongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Sharking ukrebe